के नेपाली समाजले विविधतालाई स्वीकारेको छ त? :: Setopati
के नेपाली समाजले विविधतालाई स्वीकारेको छ त?
सुदिप खनाल चैत ६
विविधता समाज निर्माणको अपरिहार्य तत्व हो। यसले समाजलाई श्रृंगार्ने काम गर्दछ। विविधता विहीन समाज खल्लो हुन्छ, निरस हुन्छ।
नेपाली समाज विविधताले भरिपूर्ण समाज हो। यहाँको भौगोलिक विविधता, सामाजिक विविधता, साँस्कृतिक विविधता साँच्चिकै लोभलाग्दो छ। नेपाललाई रंगिविरंगी फूल फुल्ने फूलबारीको रुपमा पनि साहित्यमा दर्शाउने गरेको पाइन्छ।
नेपाली समाजमा एउटा उखान प्रचलित छ, 'नजिकको तिर्थ हेला।' यो उखान नेपाली समाजले विविधताको सम्मानमा देखाएको दृष्टिकोणसँग ठ्याक्कै मिल्छ। संविधानले विविधताको सम्मान गर्ने समाज निर्माणको परिकल्पना गरेता पनि नेपाली समाज आज पनि एकपक्षीय छ, र अझै पनि एकरुपिय हुन चाहन्छ।
२०६३ भन्दा अघि भएका राजनीतिक परिवर्तनले पनि सामाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरणलाई बेवास्ता गरे जसको परिणाम विविधतालाई अनावश्यक तत्व रुपमा चित्रित गर्ने प्रणालीको विकास हुन पुग्यो।
२०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनले यस विषयलाई प्रकाशमा ल्याउने काम गर्यो। तर हालसम्म पनि यो विषय संस्थागत हुन सकेको छैन। फलस्वरुप नेपाली समाज राष्ट निर्माणको सन्दर्भमा अझैपनि पछाडि नै रहेको छ।
नेपाली समाज विविधताको उपस्थिति र त्यसको सम्मान गर्ने मामलामा धेरै पछाडि छ। टाउकोमा लगाइने टोपी र शरीरको दौरा-सुरुवालमा राष्ट्रियता जोख्ने समाजलाई विविधताको सम्मान गर्ने समाजको रुपमा कसरी मान्ने?
सिक्किमेली जनतालाई नेपाली नै जस्तो मानेर सहानुभूति प्रदान गरिरहँदा कालो वर्णको मान्छे देख्ने वित्तिकै 'भैयाको घर भारतको कुन ठाउँ?' भन्ने प्रश्न गर्ने समाज कसरी समावेशी समाज हुन्छ? मधेसी भारतीय होइनन् र भारतीय मधेसी होइनन् भन्ने नबुझेको समाजले ती रंगिविरंगी फूलको महत्व बुझेको छ भनेर कसरी पत्याउने?
महिलाहरुको अवस्था हेर्दा झन् विविधताको सम्मान गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको समाजले खिल्ली उठाएझैँ लाग्छ। महिलाहरु कमजोर हुन्छन् भन्ने पूर्वनिर्धारित मान्यता राखी उप-पदहरुमा नमुनाको रुपमा मात्र महिला सहभागिता बढाउने प्रवृत्तिकै उपज हो, आज नेतृत्व तहमा रहेको महिलाको कम प्रतिनिधित्व पनि।
बलात्कारको कारणलाई महिलाले लगाउने पोशाकसँग लगेर जोड्ने र महिलाको विषयमा महिलाले मात्र बोल्नु पर्दछ भन्ने मानसिकतामा उम्रिएको समाजबाट विविधताको सम्मानको कसरी आश गर्न सकिन्छ।
दलितहरुलाई सार्वजनिक रुपमा बन्चित गर्ने, अमानवीय व्यवहार गर्ने, धार्मिक आस्था अलग भएकै आधारमा सामाजिक बहिष्कार गर्ने, फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक बोझको रुपमा लिने, मोटो तथा पातलो व्यक्तिलाई मजाक र हाँसोको रुपमा लिने यी सबै उदाहरणले हाम्रो समाजको वास्तविकतालाई प्रस्तुत गरेको छ।
नेपाली समाजले जहिले पनि यस्ता व्यक्ति, वर्ग, समुदायलाई आफ्नो बनाउन चाहेन, माया बाढेन तर आफू प्रति सम्मानको आश गरिरह्यो। यही कारणले नै हाम्रो समाजले विविधतालाई कागजी रुपमा मात्र अपनायो, व्यवहारिक रुपमा अपनाउन सकेन।
यस्ता विभेदहरुलाई थप मजबुत बनाउने काममा चलचित्र, गीत संगीत आदिको पनि भूमिका देख्न सकिन्छ। अधिकांश चलचित्रमा महिला माथि गरिने दुर्व्यवहारलाई सकारात्मक रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ।
हिरोइनलाई बस्तुको रुपमा प्रस्तुत गर्ने, सार्वजनिक स्थानमा बिना अनुमति चुम्बन गर्ने जस्ता गलत कामलाई चलचित्रमा प्रेमको प्रदर्शन गर्ने माध्यम बनाई प्रस्तुत गरिन्छ। फलतः यसले दर्शकमा गलत सन्देशको प्रवाह गरिरहेको हुन्छ।
हाम्रा अधिकांश नेपाली उखान विभेदले भरिएका छन्। पोथी बासेको राम्रो हुन्न भन्ने उखानले महिलाहरुलाई अगाडि बढ्न दिनु हुँदैन भन्ने सन्देश दिन्छ। यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् नेपाली समाजको वास्तविकताको बारेमा।
हाम्रो समाजले सबै कुरामा निश्चित मान्यता तोकेको छ। तपाई कस्तो हुनुपर्छ? तपाईले कति बोल्नु पर्छ? तपाईको शिरमा कस्तो टोपी हुनुपर्छ? तपाईको तौल कति हुनुपर्छ? आदि आदि।
यस्ता निश्चित मान्यतामा समाजका हरेका सदस्यले आफूलाई जोख्नै पर्ने बाध्यता पनि समाजले सिर्जना गर्दछ। यस्ता मापक तत्वहरु यति पुराना छन् कि जसले विविधतालाई स्वीकार्न पटक्कै चाहँदैनन्।
यस्ता मापकको जोखाइमा केही तल वा माथि पर्ने वित्तिकै त्यसलाई हेयको दृष्टिबाट समाजले नियाल्न थाल्दछ। यसले गर्दा त्यस्ता व्यक्ति समुदायहरुको सामाजिकरण राम्ररी हुन सक्दैन।
संसारमा कोही पनि एकै खाल्को छैन र हुने छैन पनि। हरेकको सोचाइ, विचार, बनावट, मान्यता पृथक हुन्छ। नेपाल जस्तो विविधताले भरिएको समाजले पृथकतालाई सम्मान गर्ने भावना विकास गर्नु पर्दछ।
नेपाल भनेको चार किल्लामा बाँधिएका जमिनको टुक्रा मात्र होइन। नेपाल भनेको यहाँको जनताको एकताको प्रतिक हो। नेपाली बीचमा एकआपसमा सम्मान भएन, माया भएन भने नेपाल रहनुको मात्र अस्तित्व रहँदैन।
नेपालमा रहेको यस्ता विविधतालाई सम्मान गर्ने र उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु जरुरी छ। मुलुक निर्माण राजनीतिक परिवर्तनले मात्र सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि नागरिक बीचमा समझदारी, एकता र सम्मान हुन जरुरी छ।
यस्तो समझदारी र एकता निर्माण गर्नको लागि भएपनि नेपाली समाजमा विविधताको सम्मान गर्ने बानीको विकास हुन जरुरी देखिन्छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत ६, २०७७, १४:५७:११